Toetr’andro-Famatsian-drano-Lalana : arahin’ny Pnud akaiky ny tetikasa rehetra any Androy | NewsMada
Toetr’andro-Famatsian-drano-Lalana : arahin’ny Pnud akaiky ny tetikasa rehetra any Androy
Nidina tany amin’ny faritra Androy ny Pnud niaraka tamin’ny minisiteran’ny Toekarena ; ny Tontolo iainana, ny 16 hatramin’ny 20 jolay teo. Narahi-maso tamin’izany ny fanatanterahana ireo laminasa any amin’ny faritra iharan’ny haintany hatramin’izay.
Nozahan’ireo namita iraka tany an-toerana ny any amin’ny distrikan’Ambovombe, ny any Bekily ary ny any Beloha ny fizotran’ny asa hiadiana amin’ny fahantrana, ny fanohanana ny mpitondra any an-toerana amin’izay tokony hifanaraka amin’ny fiovan’ny toetr’andro sy izay fanarenana maika tsy maintsy atao.
65 km ny lalan-tany vita any amin’ny faritra ahitan’ny rehetra tombontsoa, toy ny eo amin’ny varotra ao anatin’ireo distrika telo ireo. Asa iray lehibe fanarenana vita koa ny fanamboarana tohodrano, manampy ireo mpiompy any amin’ny distrikan’Ambovombe sy i Bekily.
Anisan’ny ady atao amin’ny fahantrana any an-toerana ny fanarenana ny toekarena amin’ny alalan’ny fanomezana asa mampidi-bola. 9.000 ireo tokantrano hita fa miaina anatin’ny fahasahiranana. 5.420 amin’ireo, misy 2.600 ny vehivavy, manan-katao mampidi-bola amina sehatra samihafa.
Ny fampiharana ny fitsinjaram-pahefana
Nomen-danja manokana tamin’izany fitsidihana izany ny tena fampiharana ny fitsinjaram-pahefana any an-toerana hanohanan’ny mponina ny toekarena any aminy. Nisy, araka izany, ny fivoriana niarahan’ireo mpanao fitsidihana sy ny vondrom-bahoaka mpanatanteraka any an-toerana, nifanakalozan-kevitra momba ny andraikitry ny tsirairay ho fampandrosoana ny faritra Androy.
Niaraha-nidinika, ohatra, izay tolo-kevitra naroson’ny kaominina Tranohavo, distrikan’i Beloha, ny paikady fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro; ny vahaolana famatsian-drano ho an’ny fambolena; ny fiompiana. Efa natomboka tamin’ny voalohan’ity taona ity ireo ezaka fanampiana ny mponina ireo, manampy ny fanjakana ihany koa amin’ny ankapobeny, indrindra manoloana ny fiovan’ny toetr’andro.
Nifantoka any Androy ny Pnud sy ireo minisitera miara-miasa aminy nanomboka ny fiandohan’ny taona 2017, noho ny fahitana ny fahasahiranan’ny mponina: ny olana eo amin’ny famatsian-drano, ny tsy fisian’ny asa, ny fahapotehan’ny tontolo iainana, ny faharatsian-dalana, ny fahasarotan’ny asan’ireo vondrom-paritra.
Koa tanjon’ny Pnud sy ireo minisitera miaraka aminy ny fampifandraisana ny asan’ny mponina hisian’ny fampandrosoana any amin’ny faritra Androy, hampihena ny fahantrana, indrindra ny hanomezan-danja hatrany ny fitsinjaram-pahefana.